Toyota Crown Majesta 2004 (#641335) ကို Mayangone မြို့နယ... | CarsDB
2640 total views, 1 today
Lot Number: #641335
Zayar Myint Than
Mayangone, Yangon Division
C type ဖြစ်ပါတယ်, မာဆပ်မှလွှဲ၍ ရွှတ်သမျှပါပါတယ်။
Original TV, Leather Seats, cool box.
Car is in very good condition.
ကိုယ်တိုင်လေလံဆွဲထားပြီး auction grade 4BB ထွက်သောကားလေးပါ။
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Zayar Myint Than မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Crown Majesta 2004 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။